दिव्याको मृत्युको नयाँ खुलासा ! कोरोनाले होइन उनको मृत्यु आफ्नै श्रीमानको कारणले देवोलिनाले रुँदै यसरी बताइन् रहस्य (भिडियो हेर्नुस्) – Khabaarpati
December 9, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on दिव्याको मृत्युको नयाँ खुलासा ! कोरोनाले होइन उनको मृत्यु आफ्नै श्रीमानको कारणले देवोलिनाले रुँदै यसरी बताइन् रहस्य (भिडियो हेर्नुस्)
उनको निधनले उनका सहकर्मीहरु गम्भीर शोकमा परेका छन्। विशेषगरी देवोलीना भट्टाचार्जी उनको निकै मिल्ने साथी हुन् । उनीहरुले टेलिसिरियलमा लामो समय संगै काम गरे । दोवालीनाले दिव्यालाई आफ्नै कारमा अस्पताल लिएर गएकी थिइन्।
दिव्याको निधनपछि उनी यति दुखित भइन् कि सामाजिक संजालमा पोस्ट गर्न भिडियो बनाउँदासमेत उनको आँशु रोकिएका छैनन् । देवोलीनाका अनुसार दिव्याको मृत्यु केवल कोरोनाबाट भएको होइन, उनको मृत्यु श्रीमान गगन गबरु कारण भएको हो । लामो प्रेममा रहँदा पनि उनका प्रेमीले उनलाई मानसिक पी डा दिन्थे । विवाह पछि यो प्रकृया थप बढेको छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,